Semalt: Iifom eziphambili ze-Spam kunye nendlela yokuzikhupha
U-Lisa Mitchell, u-8 (Semalt uMphathi Wempumelelo yoMthengi, ukhumbuza ukuba ifomu eliphambili logaxekile lifikile, kwaye lingonakalisa i-Google Analytics kwiintsuku ezimbalwa. Umele ukhathazeke ukuba iwebhusayithi yakho ifumana ezininzi zezithuthi. Qinisekisa ukuba ukutyelela ofumanayo kuvela kwimithombo esemthethweni, kungekhona kwi-spam yokudluliselwa. Iqela lama-spambots lihlawula i-intanethi imihla ngemihla, kwaye ukutyelela kwabo kuvela kwiwebhusayithi njengebhokisi-for-website.com, darodar.com, kunye ne-free-share-buttons.com - picture making online.
Kutheni i-spammers isebenzisa ukuthunyelwa kogaxekile?
Kukhuselekile ukuthetha ukuba kukho ininzi yeendlela zokwenza ugaxekile, kodwa umbuzo ngubani osetyenziselwa ukuthunyelwa kwezothutho. Omnye umbuzo onokusichaza ingqondo yakho kutheni abakwa-spammers basebenzisa ukuthunyelwa kogaxekile. Impendulo elula kwaye elula kule mibuzo i-spam yokuthunyelwa yinkonzo yentengiso kwi-webmasters. Abagaxekile banethemba lokuba uza kubona imithombo yabo yokudlulisela kwaye ba tyelele iiwebhusayithi zabo ukuthenga iimveliso zabo kunye neenkonzo.
Isizathu sesibini kukuba i-spammers isabela ekuthumeleni ugaxekile kwaye yakha izixhumanisi kwiiwebhusayithi zazo. Kungenxa yokuba ezinye iisayithi zipapasha i-analytics yazo kwi-intanethi ukudala i-backlink kwinani elikhulu. Ukuba uvakatye la ma URL, ikhonkco eliya kumasayithi abo liya kwenziwa ngokuzenzekelayo. Kucacile ukuba abagaxekile benza imali eninzi kwiindlela ezinjalo ezibugugu..Ukususela kwizibhengezo kwiinkqubo ezibandakanyekayo kunye neengeniso zokubuyisela imali, bafumana amaninzi kwaye bamise iinkqubo eziliqela zokuphambuka ukuze bakhohlise abasebenzisi.
I-spambot ingena njani kwi-Google Analytics yokudlulisa idatha?
Kukho iindlela ezimbini eziphambili zokungena kwi-Google Analytics data transfer. Iyokuqala kukujolisa kwinani elikhulu lewebhu. I-Google Analytics isebenzisa umtya wentambo yee-akhawunti, kwaye i-spambots ilayishe ngokukhawuleza iikhowudi zakho kwiempendulo zazo ukuze zivaliwe kwiphepha kwii-server zazo. Makheke apha ndikuxelele ukuba abazange bavakashele iwebhusayithi yakho kwaye bakhohlise ngokudala ukubonakala kwamanga. Yonke into abayifunayo yienombolo ze-akhawunti ze-Google Analytics ezingabangela ezininzi iimali zabo.
Okwesibini, iGoogle ine-bots kunye nezikhwama zokukhawulela kwaye zibonise iiwebhusayithi. Ii-spambots zivakashela iiwebhusayithi zakho, ukujonga imbonakalo yekhasi kunye nezinga lokuhlawula lihlala liphezulu kunelo liphakathi. Idatha yabo ingena kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Kuzo zombini iimeko, i-bots kunye neempendulo zijolise kwiintloko ze-HTTP kwaye zizakubeka ukuthunyelwa kwazo kuzo naziphi na izixhumanisi. Bafuna ukukhuthaza iiwebhusayithi zabo ngenye indlela okanye enye, kwaye xa i-Google Analytics ihlola le data, izixhumanisi zazo zithunyelwa ngokuzenzekelayo.
Lapha sixoxile ngeendlela zokumisa ukuthunyelwa kogaxekile.
Ezinye zee-spam zokudluliselwa ziza kuza kwiwebhusayithi yakho kwaye zibonise amagama amabizo. Ngaloo ndlela, kulula ukuba udale isihlomelo segama lomncedisi kwaye uvimbele abo baxhamli. Igama lemphathi kufuneka libe yiwebhusayithi kwaye kufuneka libe nekhowudi efana ne-Shopify ne-PayPal.
Indlela №2: I-Filter Source
Kufuneka uqaphele ukuba abagaxekile bahamba ngqo kwiphepha lakho kwaye basebenzise iipolini njengegama labo lomkhosi. Ngaloo ndlela, kufuneka udale izihlungi ezisuka kumthombo ukuze uziphelise ngokukhawuleza. Ngethuba udala uluhlu olufanayo, kufuneka ukhumbule ukuba inani labalinganiswa li-255 kwisihlungi.